Ukugqithiselwa kobunini beentlobo ezahlukeneyo zeshishini
"Ukubandakanywa kukunika ulawulo olungcono kunye nokhetho oluninzi xa ilixesha lokuhambisa ubunini."
Ngaphambi kokuba ubandakanye, uthatho kufuneka lube zizicwangciso zakho zekamva zeshishini. Ukubandakanya naliphi na iziko elisemthethweni elizimeleyo kunika ukhuseleko lwetyala kunye nezibonelelo zerhafu, njengoko besitshilo ngaphambili kwesi sikhokelo. Ngoku siza kuthetha ngokudluliselwa kweshishini lakho njengesakhiwo esidibeneyo.
Ukuba awufakwanga, oko kuthetha ukuba uqhuba ishishini njengomnini wedwa okanye ubuhlakani, ishishini likho kuphela ukuba umnini okanye amaqabane asebenza ngokukuko kushishino. Oku kuyayeka ukusweleka okanye ukungabinamali yelungu. Emva kokufaka, ishishini lakho linokuqhubela phambili emva kwesinye seziganeko ezichaziweyo zomnini. Amashishini anexesha elingenasiphelo, ngumntu owahlukileyo osemthethweni "umntu" kwaye uninzi lwamazwe avumela ii-LLC ukuba zikhethe ixesha elingapheliyo.
Ukuba unezicwangciso zokukhulisa ishishini lakho kwaye ekugqibeleni ulithengise lilonke okanye ugcine ubunini kwaye uthengise isahlulo salo, uya kuqaphela ukuhanjiswa ngaphambi kokuba ufake. Mhlawumbi unqwenela ukuhambisa ishishini lakho kwilungu losapho.
Ukutshintshela ubunini beNkampani
Imibutho ekude kakhulu, ilula kakhulu kwiindidi zezinto ezihlanganisiweyo zokuhambisa, nokuba le yinxalenye okanye yinkampani iphela. Njengoko besitshilo ngaphambilana kwesi sikhokelo, ii-C Corporations azinamda ngokomthetho kwinani okanye kwiindidi zabanini zabelo. Xa ufaka kwaye unyula i-S Corporation Election, kukho izithintelo kwinani nohlobo lwabanini zabelo.
Ngokubanzi isivumelwano sabanini zabelo siyenziwa ukuqinisekisa intsebenziswano yabanini zabelo. Esi sisivumelwano nje esibophelelayo, esikhawulelayo kunye / okanye esilinganisela abanini zabelo ekuthatheni amanyathelo athile okanye ekwenzeni ezinye izinto. Kwesi sivumelwano kukho izibonelelo zokudluliswa kwezabelo. Oku kuvula inkundla yabanini zabelo abaseleyo ukuba bakhethe oontanga abatsha. Oku kunokukhusela ishishini kubaxhamli abanokubakho ngenjongo yokuthatha ishishini. Akunakubakho sithintelo esiqinileyo kwintengiso yesitokhwe, iinkundla azizukulixhasa eli nyathelo. Ke akukho manyathelo athintelayo ahlala ekhona. Oku kuthetha ukuba nawuphi na umnini zabelo onqwenela ukuthengisa izabelo zakhe zeshishini kufuneka aqale anikezele ngezabelo kubanini zabelo okanye kwishishini. Ukuba akukho shishini okanye nabaphi na abanye abaninizabelo abathenga isitokhwe esikhoyo, iya kuvuleleka kubatyali mali bangaphandle.
Ukuba izicwangciso zakho zeshishini emva kokuba ubandakanye zibandakanya ukuzisa abatyali mali, ukuthengisa ishishini ngokuyinxenye okanye elipheleleyo okanye ukulidlulisela komnye umntu, ukubandakanywa njengeQumrhu kufuneka liphandwe kakuhle. Ii-LLC's, esiza kungena kuzo ngokulandelayo, zinokudluliselwa, nangona kunjalo le nkqubo inokuba nzima.
Ukuhambisa ubunini be-LLC
Iinkampani ezinamatyala amancinci ziguquka ngakumbi kwaye zilawulwa zizivumelwano. Ngokwesiqhelo ezi zizivumelwano zamalungu okanye zamaqabane kunye / okanye isivumelwano sokusebenza se-LLC esenziwe emva kokubandakanya. La maxwebhu abalulekileyo ayalela iinkalo zobunini. Yonke into icacisiwe kwaye kwavunyelwana ngayo kula maxwebhu. Ukusonjululwa kwembambano, ukurhoxa kwelungu, ukuvota kunye nokudluliselwa kwenzala ukubiza nje ezimbalwa. Oku kunokuba nakho ukubanzi kwaye abanini be-LLC banemida emininzi yangaphakathi. Ngokubanzi oku kungakhokelela ekubeni ilungu lizise umnqweno walo wokuthengisa inzala kumaqabane, aya kuthi athathe ivoti nokuba ayalivumela na eli nyathelo ukuba lenzeke. Kuyakubakho amalungiselelo xa ilungu linokurhoxa apho inkqubo emiselweyo yenzeka kwangaphambili emva kwevoti yesininzi.
Kuxhomekeka kwinani labanini kunye nombutho osemthethweni wenkampani yakho, i-LLC isenokubonelela ngesithuthi esomeleleyo xa ufaka kwaye uxhasa izicwangciso zeshishini lakho elizayo. Imibutho ekudala ililungu lenkulumbuso ekuthengiseni nasekudluliseni ubunini, nangona kunjalo kufuneka ibandakanye ukuba ngubani kunye nento oceba ukuyithengisa okanye ukugqithisela ishishini lakho kuye. Ukuba ufuna ukuhlala uvulekile kulo naliphi na inani kunye nohlobo lomtyali mali naphina emhlabeni, iS Corporation ayinakuba lukhetho lwakho lokubandakanywa. Ukuba ishishini lakho ligcinwe ngokusondeleyo kwaye ucwangcisa ukugqithisela ubunini kwilungu esele likho, iqabane okanye umntu okhoyo kumbutho, ungakufezekisa oku ngokuguquguquka kongezwe kokubandakanya i-LLC.
Igqityelwe ukuvuselelwa ngoSeptemba 11, 2018